Ny UAE no nankasitraka ny firenena safidy indrindra manerana izao tontolo izao Provident Estate
Ny UAE no nankasitraka ny firenena safidy indrindra manerantany
Ny Emira Arabo Mitambatra indray dia nanao dingana iray hafa tena manan-danja tamin'ity taona ity taorian'ny nahaizany azy ho firenena matanjaka indrindra eran-tany. Araka ny filazan'ny manampahefana dia ny 96.1 isan-jaton'ny olona dia nilaza fa mahatsiaro ho voaro izy ireo handeha amin'ny alina.
Tao anatinà fanambarana, ny Jeneraly Dahi Khalfan Tamim, Filoha lefitry ny polisy sy ny filaminam-bahoaka ao Dubai, dia nanamarika fa ny tanjon'ny fandaharam-potoana nasionaly tamin'ny taon-dasa dia mahaliana amin'ny fiarovana sy ny fiarovana rehetra, izay nanosika ny lalana ho an'ny firenena saha maro.
Raha niresaka tamin'ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety mba hanambara ny valiny tao amin'ny Hotel Intercontinental tao Dubai vao haingana, Lt. Gen Tamim dia nanambara fa ny fanadihadiana dia mampiseho ny 96.1 isan-jaton'ny olona mahatsiaro ho voaro sy azo antoka ao amin'ny UAE. Notantarainy ihany koa fa voalohany ny firenena ary Singapore no tonga faharoa miaraka amin'ny 94 isan-jato, ary nanampy fa ny tetikady sy ny politikan'ny UAE dia tao ambadik'io vanim-potoana io mba hahatonga azy io ho azo antoka indrindra eran'izao tontolo izao.
Ny Jeneraly Jeneraly Dr. Abdul Quddus, Abdul Razzaq Al Obaidly, Lehiben'ny Mpanampy amin'ny Quality sy Excellence, dia nanambara ny tsy fahampian'ny famantarana na ny lampposts eny an-dalambe mba hijerena ny toerana misy ny biraon'ny polisy ho antony iray ho an'ny olona sasany tsy mahatsiaro ho voaro tsy manana ahiahy.
Nanampy koa izy fa ny mpitarika azy dia namporisika azy ireo hanatsara ny fahatsapan'ny olona ny fiarovana, ary nanasongadina fa na dia eo aza ny tsy fahampian'ny fiarovana manerana izao tontolo izao, dia lasa toeram-pialofana azo antoka ny UAE ary misy tetikasa fiarovana maro sy tetikasa manampy amin'ny fanatontosana izany.
Ny Jeneraly Shaikh Sultan Bin Abdullah Al Nuaimi, commander-in-chief of Ajman Police, dia nanindry fa ny valim-bavaka anelanelan'ny fitsangatsanganana dia mametraka ny UAE faharoa any New York City. Araka ny filazan'ny GPS azy, ny GPS amin'ny rafitra fiara fitaterana an-tariby dia nanampy azy ireo hahatratra ny toerana nitrangan'ny loza sy ny loza noho ny teo aloha.
Ny Jeneraly Jeneraly Mohammad Saif Al Zafein, izay talen'ny Federasiona misahana ny fifamoivoizana, dia nitatitra fa ny fatiantok'olon-tsambo dia nihena ihany koa tamin'ireo niharan-doza 3.83 isaky ny olona 100,000 tany amin'ny UAE tao 2018 raha oharina tamin'ireo niharan'ny 4.53 ho an'ny olona 100,000 tao amin'ny 2017. Nasongadiny fa nisy ny fihenan'ny 71 isan-jato hatramin'ny 2008 fony 13.5 no maty noho ny olona 100,000.
Naneho hevitra momba ny fihotsahana goavana na dia teo aza ny fanamby maro atrehin'izy ireo, nilaza ny Jeneraly fa nampitambatra ny ezaka rehetra nataony mba hampihenana ny isan'ireo tra-doza eny an-dalana. Nanohy nanatsoaka hevitra izy fa ny fifamoivoizana momba ny fifamoivoizana amin'izao fotoana izao dia miray tsikombakomba amin'ny sampan-draharahan'ny fifamoivoizana any amin'ny firenena.
Mandritra izany fotoana izany, araka ny voalazan'i Brigadier Hamad Ajlan Al Amimi, Tale Jeneralin'ny Polisin'ny Heloka Bevava ao amin'ny Minisitry ny Atitany, dia nidina ihany koa ny tahan'ny heloka bevava tany UAE niaraka tamin'ny firenena mitazona ny toerana ambany indrindra amin'ny lisitra mifandraika amin'ny vono olona sy ny fakàna an-keriny.
Brig Al Amimi dia nanindry fa ny famantarana ny heloka bevava dia ny 49.5 isan-jato amin'ny 2018 raha ampitahaina amin'ny 67.69 amin'ny 2017. Notsipihany ihany koa fa ny Emira Arabo Mitambatra dia voalohany amin'ny farafaharatsiny amin'ny heloka bevava mifandraika amin'ny famonoana olona miaraka amin'ny 0.7 isan-jato, fakàna an-keriny miaraka amin'ny 0.8 isan-jato, ary fanolanana amin'ny 1.2 isan-jato.
Ny fanalahidin'ny serivisy ho an'ny valinteny nopihana
Araka ny Lt. Gen Dahi Khalfan, ny vahaolana faratampony momba ny heloka bevava dia nanamboatra ny fomba hanapahana ny fotoana famaliana.
Nomarihany fa nampiditra fampiharana izy ireo, izay ahafahan'ny olona mampiasa ny smartphone hividy fitarainana na mitatitra ny heloka bevava. Nolazain'i Gen Khalfan ihany koa fa nosoratan'ny olona tamin'ny alalan'ny finday ny tranga 4,000 tamin'ny finday, ary ny sampan-draharahan'ny polisy dia eo amin'ny finday any amin'ny firenena ankehitriny.
Tagsdubai trano fonenanaReal estate dubai
Previous PostPrevious Ireo zavatra tokony hampiharina amin'ny mpampanofa trano momba ny New Visas Dubai
Next PostManaraka Tari-dalana iray hividianana trano any Dubai
Hikaroka bilaogy momba ny trano fonenana
Hotolotra G + 1 | Free 1 Month Rent | 6 Checks
Al Barsha 1 Villas, Al Barsha, Dubai
Tari-dalana iray hividianana trano any Dubai
Ireo zavatra tokony hampiharina amin'ny mpampanofa trano momba ny New Visas Dubai
Sheikh Hamdan nankasitraka ny drafitra hanodihana an'i Dubai uni ho faritra malalaka
Ny Dubai Championships Simona Halep dia nandresy an'i Ms Bennick